समाचार Archives - Page2of 266 - Like For Nepal
अत्यान्तै दुखद खबर,धरानमा घरमाथिबाट पहिरो खस्दा खेलिरहेका एकै घरका आठ बर्षीया निसु र चार बर्षीय निहानको मृ’त्यु
अत्यान्तै दुखद खबर,धरानमा घरमाथिबाट पहिरो खस्दा खेलिरहेका एकै घरका आठ बर्षीया निसु रचार बर्षीय निहानको मृत्यु सोमबारदेखि अविरल परेको बर्षाका कारण घर पुरिँदा धरानमा दुई बालबालिकाको ज्यान गएको छ । मृत्यु हुनेमा धरान उपमहानगरपालिका–१३ नागेश्वर मार्ग बस्ने निसान राईकी छोरी आठ बर्षीया निसु राई र चार बर्षीय छोरा निहान राई रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। मङ्गलबार दिउँसो १ः४५ बजे घरमाथिबाट पहिरो खस्दा निसान राईको टिनको छाना भएको एक तले घर पुरिएको छ । घटनाको जानकारी पाए लगतै इलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट उद्धारका लागि प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो । पुरिएको सो घरबाट प्रहरीले दिउसो साढे ३ बजे दुई बच्चाको शव निकालेको हो ।...
दुई एसपीसहित दर्जनौ प्रहरी घा”इते र चारजनाको मृ”त्यु भएको मोतिपुर घ”टनाका मास्टरमाइन्ड प’क्राउ
प्रहरीले सरकारी जग्गा अतिक्रमणका लागि योजना बनाउने, मान्छे जुटाउने, प्रतिकार गर्नेदेखि जग्गा भागबण्डागर्ने मुख्य अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी जग्गा अतिक्रमणका मुख्य योजनाकार साविर अलि मुसलमानलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमणको लागी मानिसहरुलाई उक्साउने, टोली गठन गर्ने, जग्गा बांडफांड गर्ने, समिति गठन गरी अध्यक्षता ग्रहण गर्ने, ब्यानर निर्माण गर्ने, माईनटिङ तयार गर्ने जस्ता कार्यको नेतृत्व गर्दै आएको जनाएको छ । उनी बिरुद्ध ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रुपन्देहीमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत सार्बजनिक शान्ती बिरुद्धको कसूरमा मुद्धा दर्ता भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट १० दिनको म्याद थप भई अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रहरीले मुसलमानको डेरा कोठामा ब्यानर ३ थान, माईनटिङको प्रति...
बुहारी झु”ण्डिएको देखेपछि सासुले के गरिन ? १३ दिन सम्म अस्पतालबाट ला’स उठेन ( हेर्नुहोस भिडियो सहित)
बुहारी झु”ण्डिएको देखेपछि सासुले के गरिन ? १३ दिन सम्म अस्पतालबाट ला’स उठेन ( हेर्नुहोस भिडियो सहित) पुरा जानकारीको लागि भिडियो थाहा पाउनुहोस। यो पनि पढनुहोस्। रुपन्देहीको सैनामैनामा एक युवाले आ”त्मह”त्या गरेका छन् । आ”त्मह”त्या गर्नेमा सैनामैना नगरपालिका–१ रानीकुवाका २४ वर्षीय गँगाबहादुर बि.क. रहेको इलाका प्र’हरी कार्यालय मुर्गिया (रन्यौरा) का प्रहरी निरीक्षक चक्रडम्बर पालले बताए । मृतक वि.क.को शवलाई पो”ष्टमा’र्टमका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल पठाइएको प्र’हरी निरीक्षक पालले बताए । घ’टनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्र’हरीले जनाएको छ । बि.क.की एक श्रीमती र २ छोरा-छोरी रहेका छन्। बि.क.ले गयराती आफ्नै घरको बलोमा डोरीको पासो लगाएर झु”ण्डिएर आ”त्मह”त्या गरेको प्र’हरी निरीक्षक पालले ग्लोबल आवाजलाई जानकारी दिए । आ”त्मह”त्या गर्नुको कारण नखुले पनि बि.क.ले मानसिक रोगको औषध...
कृषकको रोदनः एक दाना धान भित्राउन पाइएन, अब के खाने ? ( हेर्नुहोस भिडियो सहित) पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस। यो पनि: कैलालीमा कर्णाली नदीको बाढी घरभित्र पसेर डुवान हुँदा एक जनाको मृ’त्यु भएको छ। टीकापुर नगरपालीका ८ कर्मीडाँडाका ८६ वर्षका कोकरवीरे ढोली मंगलबार राति आफ्नै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा कर्णाली नदिमा पानीको बाहव बढ्न गई घरमा पानी पस्दा उनको मृ’त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घरमासँगै रहेका छोरा बुहारी भने सुरक्षित स्थानमा गएर बाँच्न सफल भएका थिए। विगत ५/६ वर्षदेखि प्या’रालाइसिसको बिरामी भई हिँड्डुलसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका उनको डु’वानमा भाग्न नसकेर घरभित्रै मृ’त्यु भएको प्र’हरीले जनाएको छ।यस्तै,,उदयपुरमा खोलाले बगाएर हुलाक कार्यालयका कर्मचारीको मृ’त्यु भएको छ। बुधबार उदयपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ बस्ने ५९ वर्षीय कृष्णबहादुर श्रेष्ठको श’व फेला परेक...
महाकाली नदीमा फसेका मानिसको सेनाको हेलिकोप्टर मार्फत उद्धार
महाकाली नदीमा फसेका मानिसको सेनाको हेलिकोप्टर मार्फत उद्धार कंचनपुर जिल्लास्थित महाकाली नदीको भङ्गालोमा फसेका भीमदत्त नगरपालिका मछेट्टीका एकै परिवारका पाँच जनालाई १८ घण्टापछि उद्धार गरिएको हाे ।सोमबार मध्यरातमा महाकाली नदीको जलस्तर वृद्धि भएसँगै महाकाली नदीकाे भङ्गालो गाउँ पसेपछि बीचमा फसेका पुष्करसिंह नायकको पाँच जनासहितकाे घर परिवारको उद्धार गरिएको हो ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय कंचनपुरका प्र’हरी प्रमुख उमाप्रसाद चतुर्वेदीले प्र’हरीलाई सोमबार मध्यरातमा नायक परिवार फसेको खबर आएसँगै प्र’हरीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेको बताए । बाँच्ने आस गुमाएका नायक परिवारलाई सरकारकाे पहलमा सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरेपछि उनीहरू खुसी भएका छन् । कंचनपुरको दुर्गम बस्तीका रूपमा परिचित खल्लामछेट्टी जिल्लाकाे सदरमुकाम महेन्द्रनगरबाट ३८ किलोमिटर उत्तर क्षेत्रमा पर्छ । उक्त बस्ती बाढीको उच्चजोखिममा ...
प्युठानमा खोलाले तीन जनालाई बगाएको छ । माण्डबी गाउँपालिका स्थित अरङखोलाले एक महिला र दुई बालबालिकालाई बगाएको प्र’हरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार देबिसराको माण्डबी २ मा श’ब फेला परेको छ । दुई जना बालबालिकाको खोजी कार्य भैरहेको प्र’हरीले जनाएको छ । आपचौरबाट स्थानीय अस्पतालमा जाने क्रममा २८ बर्षिया देबिसरा कार्की, देबिसराको दुई बर्षिय छोरा दिनेश कार्की, आठ बर्षिया अनुस्का अधिकारीलाई खोलाले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रहरी निरीक्षक देबिप्रसाद गैरेले जानकारी दिनुभयो । यो पनि: तीन दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका आएको बाढीले झापामा सात घर बगाएको छ। बाढीले ६८ घरपरिवारका १०० जनाभन्दा बढी विस्थापित भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका डिएसपी राकेश थापाले जानकारी दिए। मंगल टुडुको चार जनाको परिवार, जेठा टुडुको सात जनाको परिवार, सन्तोष राजवंशीको तीन जनाको परिवार र कवि राजवंशीको चार ...
हेर्नुहोस् आज ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य !! कति पुग्यो आजको मुल्य
नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु एक सयले बढेर ९१ हजार ४०० कायम भएको छ । छापावाल सुन सोमबार प्रतितोला रु ९१ हजार ३०० मा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले अन्तरराष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा नेपालमा दैनिक सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्य तोक्ने गर्छ । महासङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार आज तेजाबी सुन प्रतितोला रु ९० हजार ९०० मा कारोबार हुनेछ जुन सोमबार प्रतितोला रु ९० हजार ८०० मा कारोबार भएको थियो । महासङ्घका अनुसार आज चाँदीको मूल्य सोमबारको तुलनामा प्रतितोला रु १० ले बढेर एक हजार २३५ पुगेको छ । चाँदी सोमबार प्रतितोला रु एक हजार २२५ मा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी तथा रत्न आभुषण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनको असामयिक निधनको शोकमा मङ्गलबार सुनचाँदी व्यवसायीले कारोबार बन्द गरेका थिए ।...
बुहारी केटासंग रंगेहात भेटेपछि कठालो समात्दै प्रहरीसंग पठाए,सासुले अर्की बुहारी भित्र्याउदै हेर्नुस्
बुहारी केटासंग रंगेहात भेटेपछि कठालो समात्दै प्रहरीसंग पठाए,सासुले अर्की बुहारी भित्र्याउदै हेर्नुस्् यो पनि पढनुहोस्। कुचोलाई लक्ष्मीको प्रतिक मानिन्छ। त्यसैले झाडुसँग जोडिएका गुण र अपगुणले हाम्रो जीवनमा ठूलो असर पार्दछ।यदी कुचोसँग जोडिएका केही कुराको ध्यान नराख्यो भने हाम्रो जीवनमा समस्या थपिन सक्छ। त्यसैले वास्तुशास्त्रका अनुसार कुचो सम्बन्धी यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्ःघर वा अफिसमा कुचोको काम सकियो भने त्यसलाई देखिरहने ठाउँमा नराख्नुहोस्। पुरै समय कुचो देखिरहनु अशुभ मानिन्छ।कयौँ पटक कुचो भाँचिदा पनि हामी त्यसको प्रयोग गछौँ। त्यो एकदमै गलत हो। यदी घर वा अफिसमा कुचो झाँचियो वा टुट्फुट भएमा त्यसलाई तुरुन्त परिवर्तन गर्नुहोस्। यदी मिल्यो भने झाडुलाई पश्चिम दिशाको कुनै कोठामा राख्नुहोस्। यस दिशामा कुचो राख्नु निकै राम्रो मानिन्छ। जसले गर्दा कुचोका कारण तपाईको घरमा कुनै नकारात्मक प्...
वर्षाले खेतमा पाकेर थन्क्याउने बेला भएको धान बाली’मा क्ष’ति पुगे पछि यहाँका किसान चि’न्ति’त भएका छन् । धानलाई वर्षाले झा’र्नुका साथै बोट समेत ढलेका छ । आइतबार र सोमबार दुई दिनको वर्षाले रुपन्देही लगायतका जिल्लामा धान’बाली न’ष्ट भए’का छन् । काटेर खेलमै सुकाउँदै गरेका तथा भर्खर काट्ने बेला भएका धान बाली वर्षाले डु’वान’मा परेपछि कृषकको लाखौं मूल्यका धान बाली न’ष्ट भए’का हुन् । दशैं लगत्तै धान काट्न सुरु गरेका कृषकहरुले वर्षाका कारण क्ष’ति व्यहोर्नु परेको छ । धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिको रुपन्देहीका ओमसतिया, सियारी, शुद्धोदन, मर्चवारी, सम्मरीमाई, कोटइमाई लगाएका स्थानमा धानबाली वर्षाले न’ष्ट भए’का छन् । यसैगरी तिलोत्तमा, सैनामैना, कञ्चन गाउँपालिका, देवदह लगायतका कृषकहरुले पनि वर्षाका कारण क्ष’ति व्य’हो’र्नु परेको छ । रुपन्देहीमा ८२ हजार हेक्टर जमिनमध्ये रुपन्देहीमा यो वर्ष ६५ हजार भ...
भर्खरै बस दु’ र्घटना हुँदा यति धेरै जनाको भयो मृ’ त्यु !!
भर्खरै बस दु’ र्घटना हुँदा यति धेरै जनाको भयो मृ’ त्यु !! दक्षिण अमेरिकी मुलुक पेरूको अ’ याकुचोमा शुक्रबार एउटा बस दु’ र्घटना हुँदा कम्तीमा २७ जनाको मृ’ त्यु भएको छ । उक्त घ’ टनामा अन्य कैयौँ व्यक्ति घा’ इते भएका छन् ।प्रहरीले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई दिएको प्रा’ रम्भिक जानकारीअनुसार स्थानीय समयअनुसार बिहान ३ बजे अयाकुचो क्षेत्रबाट अरेक्वीपातर्फ जाँदै गरेको बस अ’ नि’ यन्त्रित भई स’ डकदेखि करिब २५० मिटर तल खोलामा ख’ सेको थियो । राजधानी लिमाबाट ६ सय किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा अवस्थित दु’ र्घटना स्थलको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार वारी पालोमिनो कम्पनी बसमा अधिकांश खानीमा काम गर्ने श्रमिक र उनीहरूका परिवार रहेका प्रहरीले बताएको छ । दु’ र्घटना भएको सूचनालगत्तै उ’ द्धार टोली, द’ मकलकर्मी र प्रहरी अधिकारीहरू घ’ टनास्थलमा पुगेर घा’ इतेहरूलाई उ’ द्धार गरि नजिकैको अस्पताल लगिएको छ । पेरुको प्रहरीले दु...